UN-ta iyo UK oo shaqaalahooda kala baxaya dalka SUDAN • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / UN-ta iyo UK oo shaqaalahooda kala baxaya dalka SUDAN
UN-ta iyo UK oo shaqaalahooda kala baxaya dalka SUDAN
June 6, 2019 - By: Axmed Muuse
Shaqaalaha hay’adaha Qaramada Midoobay ee ku sugan dalka Sudan ayaa la sheegay in halkaasi laga daad-gureenayo kadib markii ay sare usii kacday xiisada dalkaasi ka taagan.
Dowlada UK ayaa shaacisay iyaduna inay xireyso safaaradii ay ku lahayd magaalada Khartuum.
Hawlgalada ay sameeyeen isniintii lasoo dhaafay ciidamada Sudan ayaa la sheegay inay ku dhinteen in ka badan 100 qof oo ay ku jiraan 40 qof oo meydadkooda shalay laga soo saaray wabiga Nile ee mara caasimada Khartuum.
Militariga Sudan oo bilowgii todobaadkan sheegay inay joojiyeen dhamaan wadahadaladii ay kula jireen kooxaha mucaaridka iyo ururada rayidka ah ayaa Arbacadii isbedalay kuna dhawaaqay inay diyaar u yihiin in dib loo furo waan waanta xili ay militariga cambaareyn kala kulmayaan beesha caalamka.
Hase yeeshee ururada shacabka kacdoonka wada ayaa gebi ahaan qaadacay inay miiska wadahadalka la fariistaan Golaha Militariga Sudan oo iyagu weli diidan inay fuliyaan sharuudaha ay shacabka ku codsanayaan in awooda maamulka lagu wareejiyo dowlad rayid ah, waxayna horey sidan oo kale u diideen doorashada ay ku baaqeen militariga in la qabto 9 bil kadib.